URSA Broadcast နှင့် ATEM Switcher နှင့်အတူ 4K တွင်ဖမ်းမိခဲ့သောမဲလ်ဘုန်းမြို့ဆင်ဖိုနီအော်ခက်စထရာ Gala | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » URSA အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် ATEM Switcher ကိုအတူ 4K အတွက်ဖမ်းဆီးခံရသောမဲလ်ဘုန်းမြို့ဆငျဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်း Gala
Fremont, CA - ဇူလိုင်လ 31, 2018 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့သြစတြေးလျကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ Avoca အပြာရောင် URSA အသံလွှင့်ကင်မရာများနှင့်မကြာသေးမီကမဲလ်ဘုန်းမြို့ဆငျဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်း (MSO) Gala ကိုဖမ်းယူဖို့ ATEM 1 M / E ကိုထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K ဗီဒီယိုကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုခလုတ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့။ ထုတ်ပြန်ကြေညာ အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲ 4K အတွက်ဖမ်းဆီးရမိနှင့်အခြားတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ် Blackmagic ဒီဇိုင်း ရှစ်ကင်မရာထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကင်မရာများနှင့်ထုတ်လွှင့်ထုတ်ကုန်များ။
အဆိုပါ MSO ဘရာဇီး pianist နယ်လ်ဆင် Freire နှင့်သြစတြေးလျ heldentenor နှင့်ဂရမ်မီဆုချီးမြှင့်အဖြစ်လျာထားသော, Stuart Skelton နေဖြင့်ဖျော်ဖြေပွဲပါဝင်သည်တစ် Gala ဖျော်ဖြေပွဲစီးရီးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ 2018 ရာသီဖွင့်လှစ်။ 4K အတွက်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်း, ဖျော်ဖြေပွဲသြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေမှထုတ်လွှင့်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။ သုံးပြီး MSO ၏ Avoca အပြာရောင်များကသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ယခင်ဖျော်ဖြေပွဲ Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်ကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံသို့ရောင်းချခဲ့သည်ကျော် 600,000 အမြင်များအားဖြင့်စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်ဖမ်းယူဖို့, Avoca အပြာရောင်ရှစ်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခဲ့ Blackmagic ဒီဇိုင်း နှစ်ခု URSA broadcast, တစ်ဦး URSA Mini ကို 4.6K EF ငါး Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာ 4Ks အပါအဝင်ကင်မရာများ။ အဆိုပါကင်မရာများတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ switching တစ်ခု ATEM 1 M / E ကိုထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K သို့ကျွေးမွေးခဲ့ကြသည်များနှင့်လည်းအတူအသုံးပြုခဲ့ကြသည် Blackmagic ဒီဇိုင်း Talkback Converter နှင့် Mini Converter Optical Fiber 12G ဖိုင်ဘာမှ SDI ကနေရွေ့လျားသည်။
ထုတ်လုပ်သူ Toby ပါကင်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာဘင် Doudney ယခင်ကအခြားအနှင့်အတူသြစတြေးလျဖျော်ဖြေပွဲ၏နံပါတ်သေနတ်နှင့်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည် Blackmagic ဒီဇိုင်း ကင်မရာများ, ဒါပေမယ့်ဒီ URSA အသံလွှင့်သုံးပြီးပထမဦးဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ B4 မျက်ကပ်မှန်နှင့်အသုံးပြုသည့် URSA ထုတ်လွှင့်ရှိသည်ဖို့နိုင်စွမ်းကိုချစ်၏။ ရလဒ်အံ့သြခဲ့ကြ, "Toby ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကရှေ့တော်မှာရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာမှန်ဘီလူးကိုသုံးခဲ့ပေမယ့် zoom ကိုအမြဲကန့်သတ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်, သငျသညျလျင်မြန်စွာလက်ချောင်းများနှင့်မျက်နှာများပေါ်တွင်အတွက်ချဲ့နိုင်ပါလိမ့်ချင်, ကောင်းသော zoom မှန်ဘီလူးများသုံးစွဲဖို့နိုင်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့တတ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအညွန့်ဤအမြိုးအစားများအတွက် URSA အသံလွှင့်ပြီးပြည့်စုံသောစေသည်။ "
"ဒါ့အပြင်အဆိုပါ URSA အသံလွှင့်အတူ B4 မျက်ကပ်မှန်ကိုအသုံးပြုဖို့နိုင်ဖြစ်ခြင်း, ကျနော်တို့မှန်ဘီလူးမှတဆင့်အများကြီးပိုအလင်းရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လှလှပပတင်းကျပ်စွာလက်ချောင်းရိုက်ချက်များကနေသံစုံတီးဝိုင်းမှဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်နှင့်ကြှနျုပျတို့ရိုက်ချက်များပိုမိုဖန်တီးမှုတွေတကယ်ကျယ်ပြန့်ဖွင့်လှစ်ရနိုင်အနိမ့်အလငျး၌အလုပ်လုပ်နိုင် သိ. "ဟုသူကဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ Gala, Toby နှင့်ဘင်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအများအပြားထောင့်ရတဲ့၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဖြစ်အောင်နဲ့ရိုက်ချက်ထဲကကျန်ရှိသော။ ရှစ်ကင်မရာများစွမ်းဆောင်ရည်ဖမ်းယူနှင့်အတူ, သူတို့ URSA Mini ကို Pro ကိုနှင့် Micro စတူဒီယိုကင်မရာ 4K ရဲ့အနိမ့် profile များကိုနှငျ့အသေးစားဒီဇိုင်း, အ URSA အသံလွှင့်အပေါ်မှီခို။
အဆိုပါထသတ်မှတ် URSA BROADCASTER တွင်သုံးဦးသာကင်မရာသင်္ဘောသားနှင့်အတူပြေး URSA Mini ကို 4.6K အဆိုပါ URSA ထုတ်လွှင့်သုံးပြီးထည့်သွင်းခဲ့သောစင်ပေါ်ကိုမှ 45 ဒီဂရီထောင့်မှာဖွင့်ထားသဖြင့်, သံစုံတီးဝိုင်းနှင့်ပြည့်ဝ၏ရိုက်ချက်များရနိုင်ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးလသာဆောင်မှထမြောက်တော်မူခြင်းနှင့် အဆိုပါ soloists ၏တင်းကျပ်စွာရိုက်ချက်များ။ ငါး Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာ 4.6Ks အဆိုပါအနုပညာရှင်များအကြားထူထောင်ခဲ့ကြသည်နေစဉ် URSA Mini ကို 4K EF, ကျယ်ပြန့်ရိုက်ချက်များဘို့နောက်ကျောမှာ set up ခဲ့သည်။ ဤသည်ကစပယ်ယာကိုကြည့်ရှုသူများမှာတိုက်ရိုက်ရှာဖွေနေခဲ့သည်တူအောင်, string ကိုကြေးဝါ, timpani နှင့်စန္ဒရားဒေသများအနီးတွင်တည်ရှိသောကင်မရာများ, အဖြစ်စပယ်ယာများ၏ရှေ့မှောက်၌တိုက်ရိုက်ရိုက်ကူး ISO'd တစ်မူထူးခြားတဲ့ "စပယ်ယာကင်မရာ" ပါဝင်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်ကြည့်နေစဉ် "တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းထုတ်လွှင့်ပြစောင့်ကြည့်မည်သူမဆို site ကိုမျက်မှောက်သူတို့ရဲ့လိုင်းအတွက်ကင်မရာကိုမမွငျနိုငျသညျ။ လူအပေါင်းတို့သည်ကင်မရာငယ်ဒီဇိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောင့်နှင့်အတူတကယ်ဖန်တီးမှုတွေကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲအဆိုတော်နှင့်အတူလက်ျာဘက်ရှိထဲမှာပရိသတ်ကိုဆောင်ခဲ့ကြကုန်အံ့ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖန်ဆင်း, "ဘင်ကဆိုပါတယ်။ "ထိုအခါ Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာများကိုနှင့် set up ကိုထိန်းညှိဖို့လွယ်ကူပါတယ်, ဒါပြပွဲကာလအတွင်း ATEM ရဲ့ကင်မရာကိုထိန်းချုပ်ကျွန်တော်တို့ကိုလျင်မြန်စွာအာရုံကိုချုံ့နှင့် Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာများကိုညာဘက်အသီးအသီးကိုချိန်ညှိပါစေနေချိန်မှာငါအလျင်အမြန်ကင်မရာများနှင့်ထူထောင်ရရွှေ့ဖို့နိုင်ခဲ့သည် အဆိုပါခလုတ်ကနေ။ "
Avoca အပြာရောင်အားလုံးသြစတြေးလျကိုကျော်ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များ shoot နှင့်အပေါ်မှီခို Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ဖွင့်လှစ်ရန်လွယ်ကူဖြစ်။ အဆိုပါ MSO Gala ဖျော်ဖြေပွဲအပြီးတွင် Toby နှင့်ဘင်တစ်ခုတည်း SUV ကားမှာသူတို့ရဲ့ဂီယာနှင့် cabling ၏ကျန်အတူတစ်ခုလုံးကိုရှစ်ကင်မရာ setup ကို load နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံ Blackmagic လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်တတ်နိုင်နှင့်ကို set up နဲ့ဖြိုဖျက်ဖို့လွယ်ကူနှစ်ဦးစလုံးသောကြီးမားသော, အရည်အသွေးမြင့် Multi-ကင်မရာထုတ်လုပ်မှုပူဇော်နိုင်ကြသည်။ တစ်ယောက်တည်းဖိုင်ဘာ converter ကို cable ကိုလိုင်း၏ 80 ကီလိုနှင့်အတူသွားလာရှိခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, "Toby ကဆိုသည်။
လာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်း, Avoca အပြာရောင်သူတို့ရဲ့သုံးပါလိမ့်မယ် Blackmagic ဒီဇိုင်း ဂျာမဏီရဲ့ Unitel များအတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့ဆငျဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်းနှင့်အတူအလုပ်ရိုက်ကူးဖို့လုပ်ငန်းအသွားအလာ။
"ဒါဟာဂျာမန်ဈေးကွက်အတွက်ဤဖျော်ဖြေပွဲများကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဂျာမန်ထုတ်လွှင့်တစ်ခုသာအလွန်မြင့်မားစံနှုန်းကိုလက်မခံခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်ကျနော်တို့ရွေ့လျား, Blackmagic ဂီယာကို အသုံးပြု. ဖမ်းယူခြင်းနှင့်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြင့်မားတဲ့စံနှုန်းဖို့ပို့ဆောင်နှင့်ဤအလွန်ဂုဏ်သိက္ခာကုမ္ပဏီအားဖြင့်ဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်လိမ့်မယ် "ဟုသူကကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
URSA အသံလွှင့်, URSA Mini ကို 4.6K, Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာ 4K, ATEM2M / E ကိုထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို 4K, Mini ကို Converter Optical Fiber 12G, Talkback Converter အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အခြားကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ပုံများ Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images
4K ATEM blackmagic Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ကှတျချစက္ခုဗေဒ melbourne ဆင်ဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်း micro Stuido ကင်မရာ 4K post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ URSA URSA အသံလွှင့်ကင်မရာများ URSA Mini ကို ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-07-31
ယခင်: အမ်စတာဒမ်အတွက် 2018 IBC Show မှာပြပွဲရန်ပြောင်းလဲမည်
နောက်တစ်ခု: IBC2018 မှာ InSync နည်းပညာ